Samee akhrinta - warqadaha waraaqaha
Dib u eegid ha lagu sameeyo
, Wanaagsan inaad ogaatid
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah tafatirka
Qoraal kasta oo qoran waa inuu maraa tafatir xirfadeed. Kuma xirna nooca qoraalka uu yahay. Qoraallada waxay noqon karaan
Qoraallo nooc kasta ah (xayeysiin, tilmaamaha hawlgalka, macluumaadka takhasuska leh, iwm.)
Shaqada cilmiga ah
Tixraacyo (Bachelor-, Master-ka-, Qoraal)
Daabacadaha joornaalada xirfadeed.
Tafatirka iyo / ama akhrinta
Xaalado badan shuruudaha Akhrinta iyo Akhrinta si isku mid ah loo is barbar isticmaalo. Si kastaba ha noqotee, labada ereyba way ku kala duwan yihiin nooca hawsha. Akhrinta, imtixaanku wuxuu diiradda saarayaa arrimaha rasmiga ah sida xarakaynta, naxwaha iyo higgaadinta. Gaar ahaan dib-u-habeyntii higaada ee dhacday 1996 iyadoo isbedel lagu sameeyay 2004, 2006, 2011 iyo markii ugu dambeysay ee 2017, mararka qaar ma sahlana in si hufan loo isticmaalo higgaadinta. Arrin kale oo sii murgisay ayaa ah in mararka qaarkood higgaadda hore sidoo kale loo isticmaali karo marka lagu daro higgaadinta cusub. Guud ahaan, waxaa la dhihi karaa jeegga higaada ee saxda ah wuxuu noqdaa mid waqti badan qaadanaya. Intaas waxaa sii dheer, qoraalka waxaa loo hubiyaa u hogaansanaanta shuruudaha rasmiga ah inta lagu guda jiro akhrinta (xariijinta xarriiqda, xad-dhaafka, kala-bixinta kor iyo hoosba, habka xigashada, buugaagta).
Tifatirka, diiradda qoraalka loo habeeyay waxay kuxirantahay heerka luqadeed, qaab-dhismeedka iyo heerka nuxurka. Seddexdan qodob ee hoose waxay sidoo kale ka kooban yihiin qodobada ugu badan ee dhaleeceynta, gaar ahaan marka laga hadlayo shaqada ardayda cilmiga leh ee kormeeraha ama borofisarka. Khaladaadka sidoo kale waa la xalliyaa oo lagu sixi karaa dib-u-akhrin. Si kastaba ha noqotee, qodobbada dhaleeceynta ee khuseeya qoraalka laftiisa ayaa aad u culus.
Tifatirka wuxuu ku saabsan yahay qaab isku mid ah qoraalka. Tani kaligeed waxay u baahan tahay wadashaqeyn dhow oo udhaxeysa qoraha qoraalka iyo tifaftiraha. Tifatiraha ayaa ku daraya sixitaanka loo baahan yahay qoraalka. Saxitaanku wuxuu sidoo kale khuseyn karaa dhammaan marinnada qoraalka. Xaaladahaas oo kormeeraha qoraalka uu ku xusayo in meelo badan ama xitaa cutubyada qaarkood qoraalka uusan xiriir la lahayn mowduuca, waxay macnaheedu noqon karaa in qormooyinka sayniska ay tahay in dib loo qoro.
Shaqada waxaa lagu hubiyaa luqad ahaan iyo qaab dhismeed ahaanba. Sixitaanka qaabdhismeedka ayaa badanaa loo baahan yahay. Weedhaha nested sida kuwa ay dejiyeen Kaysar ama Cicero qoraalladooda waxay xannibayaan socodka akhriska ee warqad aqooneed. Shaqada sayniska waxay ku saabsan tahay xogta iyo xaqiiqooyinka ay tahay in lagu sameeyo jumlado si fudud loo akhrin karo. Falanqaynta falsafada-cilmiga sayniska ayaa fudud oo kaliya in la akhriyo haddii xaqiiqooyinka loo soo bandhigo sida ugu yar ee suurtogalka ah laakiin sida ugu faahfaahsan ee loo baahdo Marka shaqada tifaftiraha waa inuu qoraal dul dhigo
Akhriska oo si fiican loo yaqaan
Ku darista ereyo isku mid ah si looga fogaado ku celcelinta ereyga
qaabdhismeedka macquul ah ee shaqada iyo
si loo hubiyo saxnaanta weedhaha la sheegay.
Iyadoo tafatirka xirfada leh, xitaa qoraal cilmiyaysan oo dhexdhexaad ah ayaa dib loogu habeyn karaa heerka koowaad. Sababaha la sheegay awgood, tafatiriddu waa ugu yaraan waqti-qaadasho sida qorista qoraalka tacliinta. Haddii dib-u-akhrin loo baahan yahay ka-dib-u-habeynta, waqtiga iyo dadaalka loo baahan yahay ayaa mararka qaarkood xitaa ka sarreeya qoraalka laftiisa.
Haddii aad jeclaan lahayd wakaaladdayada qormooyinka qormooyinku si ay u caddeyso shaqadaada aqooneed si xirfadeysan, waa inaadan ka gaabsan inaad weydiisato dib-u-habeyn xirfadeed isla waqtigaas. Qorayaashayagu waxay ka yimaadaan xirfado waxbarasho oo kala duwan. Dhammaantood waxay leeyihiin shahaadooyin tacliimeed oo u dhigma oo ay ku jiraan baxnaaninta. Taasi waa sababta aan runtii u heli karno khabiir kugu habboon adiga si aad wax uga beddesho qaybtaada takhasuska leh. Markaad tixgelinayso qodobka loo baahan yahay waqtiga, si kastaba ha noqotee, waa inaad siisaa tifaftiraha / ghostwriter waqti ku filan. Waqtiga tifaftirka waa in lagu xisaabtamo marka la qorsheynayo warqad cilmiyeysan. Tusaale ahaan, haddii aad haysato wakhti toddobo toddobaad ah oo aad ku qortid warqad, macno ayey samaynaysaa inaad qorsheyso usbuuca ugu dambeeya tafatirka iyo akhrinta.
Tifatirka iyo dib u eegista waa adeegyo guud ahaan iyo si cad ay u doonayaan kormeerayaasha waraaqaha tacliimeed. Waxaan kaa yareyn karnaa imtixaankan waqtiga badan qaadanaya, kaasoo ku siinaya xorriyadda inaad xoogga saarto waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee waxbarashadaada. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa xorriyadda aad heshay si aad ugu dadaasho arrimahaaga gaarka ah.
Nala soo xiriir haddii aad jeceshahay akhrinta. Waxaan ku ilaalinaa qoraalkaaga aqoonteena khibrada leh.
Hubinta tayada ee aagga tafatirka
La wadaag qoraalka blog
Waa inaad Xusuusnow si looga tago faallo.
Websaydaan wuxuu isticmaalaa Akismet si loo yareeyo spam. Wax dheeraad ah ka baro sida macluumaadkaaga faallooyinkaaga loo shaqeeyo.